सहायक भूमिका पो ! - मनोरञ्जन - नेपाल
सहायक भूमिका पो !
वैशाख तेस्रो साता दीपेन्द्र लामाको निर्देशन रहने फिल्म गोपीको घोषणा गरियो । हिरोइनका रुपमा सुरक्षा पन्तलाई परिचय गराइयो । अन्य महिला कलाकार घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्, न निर्माण पक्षले कुनै जानकारी नै गरायो । जबकि, दुवै हिरो उपस्थित थिए– खगेन्द्र लामिछाने र अंकित खड्का । त्यसैले लाग्यो, फिल्मकी मुख्य हिरोइन सुरक्षा नै हुन् । तर, बल्ल आएर भेद खुल्दै छ, सुरक्षा त सहायक भूमिकामा पो सीमित रहिछिन् । प्रमुख चरित्रमा वर्षा शिवाकोटीको प्रवेश भएको छ । त्यतिबेला मुख्य हिरोइन फाइनल नभएकाले सुरक्षालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको रहेछ । त्यसो त वर्षाभन्दा अगाडि निर्माण पक्षले आँचल शर्मालाई प्रस्ताव राखेको थियो । पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेपछि वर्षालाई खुदो पल्टियो ।